मनाङमा यस वर्ष यार्सागुम्बा लगायत जडिबुटी उत्पादनमा बृद्धि - Gandak News
गण्डक न्यूज द्वारा २६ भाद्र २०७५, मंगलवार १३:२० मा प्रकाशित
नेगम परियार, मनाङ । हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा यस बर्ष जडिबुटीको मात्रा बढेको छ । बर्षेनि जडिबुटी संकलन गर्दै रोजगारीको साथै आर्थिक सुधार गर्ने गरेको यस जिल्लाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत जडिबुटी हो । बैशाखबाट मनाङ जिल्लामा बिभिन्न जडिबुटीहरु टिप्ने समय सुरु हुन्छ ।
बिशेष गरि जडिबुटि मध्ये मनाङ जिल्लाको प्रमुख जडिबुटी र्यासागुम्बा हो । मनाङ जिल्लाको मुख्य आम्दानी हुने क्षेत्र भने कै जडिबुटी र पर्यटन हो । बिश्वमै महङगो मा बिक्रि हुने यार्सागुम्बा जडिबुटीको पहिलो नम्बरमा नाम आउने यार्सागुम्बाको नाम हो । यसका साथै मनाङ जिल्लामा पाईने मुख्य जडिबुटीहरु क्रमश: पाँच औँले, जटामसी, टिमुर, सिवाक्थ्रोन, कुटुकी, निरमसी, टिक्का, गुगन्धवाल, पदमचाल, तिराईतो, तेजपत्ता, गुछेच्यउ, कुरिलो, जिम्बु लगायतका जडिबुटि यस जिल्लाको मुख्य जडिबुटिहरु हुन ।
हुन त यस जिल्लामा बिभिन्न प्रकारका अन्य जडिबुटीहरु पनि पाईन्छ । मनाङ जिल्लामा यस्ता यार्सागुम्बा पाईने स्थानहरुको नाम लिनु पर्दा १३ वटा गाउँहरुमा ३६ वटा भन्दा बढी यार्सागुम्बा पाईने खर्कहरु तोकिएको छ । अन्य जडिबुटीहरु भने बिभिन्न समयहरुमा जिल्लाका बिभिन्न समयहरुमा पाईन्छ । हिमाली क्षेत्रहरुमा पाईने यी र यस्ता जडिबुटिहरु मध्ये मनाङ जिल्लामा पाईने यार्सागुम्बा पाईने सिजन बैशाख देखि असार मसान्तर सम्म यार्सागुम्बाको राम्रो सिजन समय मानिन्छ ।
यार्सागुम्बालाई नेपालीमा जिबन बुटीको नाम बाट पनि चिनिन्छ । मनाङ जिल्लाबाट यस आर्थिक बर्ष २०७३÷२०७४ मा जिल्ला भित्रको र जिल्ला बाहिरको यार्सागुम्बा खोज्नको लागी मात्र १,७८१ जना मानिसहरु मनाङ जिल्लाका बिभिन्न खर्कहरुमा गयका थिय । मनाङमा यस सिजन मात्र १५७.१४१ के.जी यार्सागुम्बा उत्पादन भई निकासा गरिएको छ ।
मनाङमा यार्सागुम्बाबाट यार्सागुम्बाको ठेक्का बाट रु. २,५४,६३,५०० रुपैँया संकलन भएको छ ।
यो सिजनमा यार्सागुम्बा बाट मात्रै रु.३९,२८,५२५ रुपैँया राजस्वा संकलन भएको छ । त्यस्तै मनाङका अन्य जडिबुटिहरुमा गुच्ची च्याउ पनि एक हो । यस बर्ष गुच्ची च्याउँ ७ के.जी उत्पादन गरि निकासा भएको छ । निकासा बापत गुच्ची च्याउँ प्रति के.जी ३०० रुपैँया राजस्वा कर तिरे पछि मात्र भौचार सहित निकासा गर्न पाईने प्राबधान छ ।
सतुवा यस बर्ष ४०९ के.जी उत्पादन भएको छ । सतुवाको प्रति के.जी रु.२० रुपैँया बाहिर निकासा गर्दा राजस्व कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । सतुवा बाट यस बर्ष रु.८,१८० रुपैँया राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै अर्को हो बन लसुन , बनलसुन यस बर्ष १,९३५ के.जी. उत्पादन भएको छ । बन लसुन निकासा गर्न प्रति के.जी रु.१५ रुपैँयाको दरले राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिले भन्दा यस बर्ष राम्रो उत्पादन भएको प्राकृतिक श्र्रोत संरक्षण मनाङका सहायक नेत्र लाल महतारा ले बताय । महताराका अनुसार अघिल्लो बर्ष भन्दा यस बर्ष बढी कडा सुरक्षा ब्यबस्था परिचालन गरिएको ले पनि चोरी निकासीमा कमी भएको कारण मनाङ जिल्लाको सबै किसिमका जडिबुटीहरुको उत्पादन बढेको बताए ।
मनाङमा सामान्य जडिबुटी जस्तै तिमुर तथा जिम्बु जस्ता जडिबुटि घरायासी प्रयोजनका लागी भने कुनै पनि राजस्व तथा कर तिर्नु पर्दैन । मनाङ जिल्लाको जडिबुटी तथा पशुपन्छीहरुको संरक्षण तथा सम्र्बदन गर्नको लागी बिभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना संरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापन समिति चामे मनाङका सहयक नेत्रलाल महताराले बताए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस मुलुककै उत्कृष्ट, २ लाख ५० हजार नगदसहित पुरस्कृत